रेखा र आर्यन कति रोमान्टिक ? « Mazzako Online
रेखा र आर्यन कति रोमान्टिक ?
नायिका रेखा थापा तथा नायक आर्यन सिग्देल अभिनित फिल्म ‘रुद्रप्रिया’ कात्र्तिक २ गतेबाट सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउँदैछ । फिल्मको ट्रेलर भने सोमबार साँझ साढे चार बजे रिलिज हुने बताईएको छ । ट्रेलर रिलिज पुर्व रेखा भने नायक आर्यनसँग रोमान्टिक मुडमा देखिएकी छिन् । गुलाफको पत्तासँग रेखा र आर्यन रोमान्टिक मुड मज्जाको देखिन्छ ।
अर्जुन पोखरेलको संगीत रहेको गीतको हाल छायाँकन भैरहेको छ । गीतको भिडियो निकै नै राम्रो बनेको रेखाले बताइन् । भिडियोलाई प्रविण सिंहले निर्देशन गरिरहेका छन् । रुद्रप्रिया बाटै प्रविण कोरियोग्राफरमा डेव्यु भएका हुन् ।
फिल्मको ‘चिरविरी चाँचरी’ बोलको गीत हिट र रेखा र आर्यन ८ वर्षको ग्याप पछि एकसाथ काम गरेकाले पनि ‘रुद्रप्रिया’ प्रतिक्षित बनेको छ । सुदिप बबी भूपाल सिंहको निर्देशन रहेको फिल्ममा रेखा र आर्यनसँगै राजन इशान, टिका पहारी लगायत कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । सरस्वती थापा र रमेश एमके पौडेल निर्माता रहेको फिल्मलाई संजय लामाले खिचेका हुन् ।